अफ्रिकी देशमा मलेरियाविरुद्धको अभियानमा ‘ऐतिहासिक अनुमति’
अाईतबार, कार्तिक ७, २o७८
प्रदेशसभा बैठक स्थगित, आचार्यको सत्ता लम्बियो
सर्लाहीको नवलपुरमा बन्यो नयाँ सबस्टेसन, विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीय र चुहावट घट्ने
बाढी प्रभावितलाई छिटो राहत प्याकेजको घोषणा गरिने छ : प्रधानमन्त्री देउवा
टाउकोको मूल्य ५० लाख डलर तोकेको कुख्यात लागू औषध तस्कर पक्राउ
१० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै बस्नेको हरिबिजोग छ: माधव नेपाल
सुबाश लिम्बु (काठमाडौँ डेस्क ) - बिहिबार, असोज २१, २o७८ - 53
काठमाडौं। धेरै वर्षको प्रयासपछि तयार पारिएको मलेरिया विरुद्धको खोपको स्वीकृतिसँगै अफ्रिकी देशका बालबालिकाले घातक रोग मलेरियाविरुद्धको खोप लगाउन पाउने भएका छन् ।
खोपले स्वीकृति पाउनुलाई घातक मलेरियाविरुद्धको अभियानका लागि ऐतिहासिक सफलता मानिएको छ । मलेरियाका कारण विशेष गरी बालबालिका तथा शिशुहरुको ज्यान जाने गरेको छ । धेरै वर्षको प्रयासपछि मलेरियाविरुद्धको खोप तयार भएको हो ।
यो औषधि विज्ञानमा विश्वकै ठूलो उपलब्धिमध्येमा पर्छ । आरटीएस, एस नाम गरेको खोप ६ वर्ष पहिले नै प्रभावकारी प्रमाणित भएको थियो । घाना, केन्या र मालवीमा ‘पाइलट’ खोप अभियानपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले मलेरियाविरुद्धको खोपलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो । डब्लूएचओले खोप सब–सहारा अफ्रिकी क्षेत्रसँगै मलेरियाको संक्रमणदर उच्चदेखि मध्यम रहेको अरु क्षेत्रमा पनि खोप लगाउन भनेको हो ।
डब्लूएचओका प्रमुख डाक्टर टेडरोज एड्रोनोम गेब्रेयेसोसले मलेरियाविरुद्धको खोप प्रभावकारी भइ स्वीकृत हुनु ऐतिहासिक क्षण रहेको बताएका छन् । संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने मलेरियाले रक्तकोषलाई नोक्सानी गरी व्यक्तिको ज्यानै जान सक्छ । खोपले मलेरिया परजीवीलाई मार्ने छ । अहिलेसम्म लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न झुल प्रयोग गर्ने तथा मार्नका लागि विषादी प्रयोग गर्नेसहितका उपाय अपनाइएको छ ।
मलेरियाका कारण सबैभन्दा धेरै अफ्रिकामा मानवीय क्षति हुने गरेको छ । सन् २०१९ मा मलेरियाका कारण अफ्रिकामा दुई लाख ६० हजारभन्दा धेरै बालबालिकाको ज्यान गएको थियो । विश्वमा हरेक वर्ष २२ करोड ९० लाख मलेरिया संक्रमित हुने गरेका छन् ।
त्यसमध्ये ९४ प्रतिशत संक्रमित अफ्रिकाका हुने देखिएको छ । विश्वभर मलेरियाका कारण प्रतिवर्ष चार लाख ९ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ । खोपले १० मध्ये चार जनामा मलेरियाको संक्रमण रोक्न सक्ने र १० मध्ये तीनजनामा गम्भीर खालको संक्रमण रोक्ने देखिएको छ ।
बिहिबार, असोज २१, २o७८
आजको प्रश्न ?
अफगानिस्तानमा फसेका नेपालीको लागि सरकारी पहल प्रति तपाई मत
नेपाली बक्सर हिमचितुवाले जिते ‘हिट ४९ प्रोफेसनल बक्सिङ च्याम्पियनसिप २०२१’को उपाधि
नेपाली यू–२३ टोली मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा इन्डोनेसियासँग पराजितकाठमा
फिल्म सुटिङमा हिरोले हानेको गोली लागेर एक महिलाको मृत्यु
अमेरिकाले ताइवानको प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा चीनले के भन्यो ?
शनिवार, कार्तिक ६, २o७८
डब्ल्यूएचओद्वारा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड खोप उपलब्ध गराउन विश्वका देशहरुलाई आग्रह
शुक्रबार, कार्तिक ५, २o७८
डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा नयाँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेे घोषणा
बिहिबार, कार्तिक ४, २o७८
डब्ल्यूएचआको चेतावनीः कोभिड माहामारी सन् २०२२ सम्म लम्बिन सक्छ
उत्तर कोरियाले पनडुब्बीबाट हानिने नयाँ बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको पुष्टि
बुधबार, कार्तिक ३, २o७८
क्षमतायुक्त हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको अमेरिकी समाचारको चीनद्वारा खण्डन
मङ्गलबार, कार्तिक २, २o७८
जम्मु–कश्मीरमा भुठभेड: ९ सैनिक र १३ आतंकवादीको मृत्यु
सोमबार, कार्तिक १, २o७८
© २०१७ - २०२१ NRNpost.com सर्वाधिकार सुरक्षित